Odonsa Neodymium (obizwa nangokuthi "NdFeB", "Neo" noma "NIB" odonsa) odonsa unomphela abanamandla abenziwe nge-neodymium, i-iron ne-boron alloys. Ziyingxenye yochungechunge lukazibuthe womhlaba ongajwayelekile futhi zinezici eziphakeme kakhulu zikazibuthe zazo zonke izibuthe ezihlala njalo. Ngenxa yamandla abo kazibuthe aphezulu nezindleko eziphansi uma kuqhathaniswa, zingukukhetha kokuqala kwezicelo eziningi zabathengi, ezentengiso, zezimboni nezobuchwepheshe.
Omazibuthe beNeodymium babhekwa njengabaqinile ngenxa yokusetshenziswa kwawo kukazibuthe omkhulu kanye nokumelana nedemagnetization. Yize zibiza kakhulu kunemagnethi e-ceramic, odonsa abanamandla be-neodymium banethonya elinamandla! Inzuzo enkulu ukuthi ungasebenzisa usayizi omncaneNdFeB odonsaukufeza injongo efanayo nozibuthe abakhulu, abashibhile. Njengoba usayizi wedivayisi yonke uzokwehliswa, kungaholela ekwehlisweni kwezindleko zizonke.
Uma izinto ezibonakalayo zikazibuthe we-neodymium zihlala zingashintshi futhi zingathintwa yi-demagnetization (njengokushisa okuphezulu, ukubuyisela emuva amandla kazibuthe, imisebe, njll.), Ingahle ilahlekelwe ngaphansi kokucishe kube yi-1% lokuminyana kwayo kukazibuthe kungakapheli iminyaka eyishumi.
Omazibuthe beNeodymium abathinteki kakhulu ngokuqhekeka nokuqhekeka kunezinye izinto ezingavamile zomhlaba zikazibuthe (njenge I-Sa cobalt (SmCo)), futhi izindleko nazo ziphansi. Noma kunjalo, zizwela kakhulu ekushiseni. Ngezicelo ezibucayi, i-S cobalt ingaba yindlela engcono ngoba izakhiwo zayo kazibuthe zizinzile emazingeni okushisa aphezulu.
Ama-N30, N35, N38, N40, N42, N48, N50 no-N52 amamaki angasetshenziselwa omazibuthe be-NdFeB bazo zonke izinhlobo nobukhulu. Sigcina labomazibuthe ku-disk, induku, ibhulokhi, induku nezimo zezindandatho. Akuwona wonke odonsa be-neodymium aboniswa kule webhusayithi, ngakho-ke uma ungakutholi okudingayo, sicela uxhumane nathi.